United States of America inoda kujoina UNWTO
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » United States of America inoda kujoina UNWTO
Andorra Kupwanya Nhau • Azerbaijan Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Dhinda Zviziviso • Press zvinoburitswa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
US Tourism uye UNWTO iri kugadzira nhoroondo muBaku, Azerbaijan. IWorld Tourism Organisation (UNWTO) parizvino iri kuita musangano wayo weKanzuru yeKanzuru muBaku, Azerbaijan. Nhasi Dhipatimendi Rezvekutengeserana reUS razivisa chinangwa cheUSA kuva nhengo inotevera yeUNWTO. UNWTO yanga ichiedza kugonesa United States kuti ive nhengo kwemakore mazhinji. Izvi zvinogona kutaridzirwa kutendeuka kwesangano rakabatana reUN.
IUS pakutanga yaive nhengo yekutanga yeUNWTO uye mushure memakore mazhinji vakapinda kanzuru nedonzvo rekubatanidzwazve nesangano.
"Tinotarisira kushanda pamwechete kukurudzira kushanya pasirese," akadaro Emma Doyle, mutevedzeri & mutevedzeri wemukuru wevashandi
Vemukati vanotenda kuti uyu uchave mutambo wekuchinja kwete chete weUNWTO asiwo yeUnited States uye kubatanidzwa kweUS mukati mepasirese yekufambisa uye yekushanya indasitiri Kwemakumi emakore iyo US haina kumbove zviri pamutemo patafura, uye kufamba uku kunogona kungounza iyo US mumufananidzo asi pachigaro chepamberi. Izvo zvinobvumidza nzira yakanaka uye yakaenzanirana kurwisa pesvedzero China neRussia yakagadzwa mune ino indasitiri yepasirese.
Mukutanga kwekutanga kwemashoko enhau eTN yakataura nezve hurongwa hweUnited States hwakagadzirirwa kujoina UNWTO inogona kunge yakakurukurwa pa kudya kwemanheru neSvondo. Mutungamiri weJamaica Tourism VaBartlett vakakurukura nezvenyaya nevanoshanda navo muTourism Resilience network pakudya ikoko.
eTurboNews iye zvino akaziviswa naIsabel Hill, Director, National Travel uye Tourism Hofisi ku US Dhipatimendi Rekutengeserana. uye Gurukota rezvekushanya kuJamaica Bartlett kuti musoro uyu hauna kutaurwa panguva yekudya kwemanheru. Gurukota rezvekushanya muJamaica Bartlett akange asina basa rekugonesa United States kuratidza chinangwa nekubatana neUNWTO.
eTN inokumbira ruregerero pamusoro pekukanganisika kupi mukuvandudzwa kwemushumo wenhau unodambura.